Nepali Rajneeti | एमसीसी पास गर्नको निम्ति जनता फकाउँदै बाबुराम भट्टराई, गाउँ-गाउँमा पुगेर एमसीसी बारे यस्तो जानकारी दिदै !
पुष १६, २०७८ शुक्रबार १९६ पटक हेरिएको
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई यतिखेर गृहजिल्ला गोरखामा छन् ।
उनी गोरखामा मंगलबार दिनभर र राति अबेरसम्म चलेको पार्टीको संगठन सुदृढीकरण तथा जनपरिचालन (सुज) को दोस्रो अभियानमा नै केन्द्रित रहे ।
डा।भट्टराईले गोरखाका जनता, बुद्धिजीवी, विभिन्न दलका कार्यकर्तामाझ मुलुकको विकास र समृद्धिबारे निरन्तर छलफल गरे । सो छलफलमा जनताले अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी बारे चासो राखेको डा भट्टराईको भनाइ छ ।
उपेन्‍द्र यादव भन्छन्- एमसीसीबारे सहमतिका आधारमा मात्रै निर्णयउपेन्‍द्र यादव भन्छन्- एमसीसीबारे सहमतिका आधारमा मात्रै निर्णय
मंगलबार बेलुकी ट्वीटरमा डा. भट्टराईले लेखेका थिए, ‘गोरखामा दिनभर र राति अवेरसम्म चलेको सुज अभियानको दोस्रो शृंखला १ स्थानीय विकास निर्माण र राष्ट्रिय राजनीति, एमसीसी नै प्रमुख जनसरोकारका विषय ।
’ डा भट्टराईले भने एमसीसीलाई २०औं शताब्दीको ‘जमेको’ दिमागले होइन, २१औं शताब्दीको ‘खुला’ दिमागले सोच्न आग्रह गरेका छन् । ८ पुसमा ट्वीटरमा उनले एमसीसी अपनाउँदा विदेशी सेना नआउने तथा चित्त नबुझे ३० दिनको सूचना दिएर खारेज गर्न सकिने बताएका थिए ।
थप स्पष्ट पार्दै उनले भनेका थिए-
१) यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट (परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता) होस् शान्तिरसुरक्षारसीमा सम्झौता हैन ।
२) अनुदान रकम होस् ऋण हैन, तिर्न पर्दैन ।
३) नेपालको कानुनभन्दा माथि यो हुन्न, कुनै वि’वाद भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार हुन्छ ।
४) विदेशी सेना आउन्न, चित्त नबुझे ३०दिनको सूचना दिएर यो खारेज हुन्छ ।
एमसीसीको विषयमा सत्ता गठबन्धनले ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी राष्ट्रघा’ती नभएको भन्दै अगाडि बढाउनुपर्ने विचार राखेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘एमसीसी राष्ट्रघा’ती भन्ने मैले त देखेको छैन । प्रजातन्त्रको लागि देशको लागि ल’डेको मान्छे हुँ । मैले राष्ट्रघा’ती सम्झौता गरौला र ? म पनि देशभक्त नेपाली हो नि । एमसीसी सहमतिमै आएको छ । राष्ट्रघा’ती भन्नुभन्दा पहिले बुझ्नुस् के !
’पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले महाधिवेशनमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा एमसीसीलाई परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाएरमात्र अघि बढाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् ।माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीका नेताहरू एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सो पार्टीले पनि ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । यो खबर साभार गरियको हो ।